August 17, 2019 - Real Gaming Myanmar
O G ဘာ လို့ ယူ ချင် တာ တွေ ယူ ပြီး တော့ နိင် နေ တာ လဲ ?
O G ဘာ လို့ ယူ ချင် တာ တွေ ယူ ပြီး တော့ နိင် နေ တာ လဲ ? …
အမျိုးသမီးများသတိထားကြပါ….. ဖြစ်သွားပြီးမှဆို မလွယ်ဘူး မိန်းကလေးများ သထိထားရန်ကူးယူတင်ပြလိုက်ပါတယ် …. ။ အမျိုးသမီး တစ်ဦးက ဓာတ်ဆီဆိုင်မှာ ဓာတ်ဆီ ဖြည့်နေတုန်း သပ်သပ် ရပ်ရပ်ဝတ်စား ထားတဲ့ ယောက်ျားတစ်ဦးက …
“ဖခင်အရင်း၏ ရမက်အတွင်း ကြွေကျခဲ့ရသော ပန်းကလေးတပွင့်”
“ဖခင်အရင်း၏ ရမက်အတွင်း ကြွေကျခဲ့ရသော ပန်းကလေးတပွင့်” သားသမီးဆိုတာ ကိုယ့်ရတနာ၊ ကိုယ့်မျိုးဆက်၊ ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်လို့ ဖခင်တိုင်းက ခံယူထားကြတယ်။ ဖခင်ရယ်လို့ ဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့ ကိုယ့်သား၊ ကိုယ့်သမီးတွေအပေါ်မှာ သူများတွေရဲ့ ရန်ပြုမှာကို …
“ ရေ ဘေး သင့် ပြည် သူ တွေ အ တွက် ဆန် အိတ် အ လုံး ( ၁ ၀ ၀ ) လှူ ဒါန်း ခဲ့ တဲ့ သ ရုပ် ​​ဆောင်​ ဒေါင်း ” …
“ ရေ ဘေး သင့် ပြည် သူ တွေ အ တွက် ဆန် အိတ် အ လုံး ( ၁ ၀ …
ကွမ်း လုံ နှင့် သိန်း နီ ကြား တံ တား ၂ စင် အား သောင်း ကျန်း သူ အ ဖွဲ့ မှ မိုင်း ခွဲ ဖျက် ဆီး …
ကွမ်း လုံ နှင့် သိန်း နီ ကြား တံ တား ၂ စင် အား သောင်း ကျန်း သူ အ ဖွဲ့ …
သင့် ရဲ့ ဂိမ်း ဆိုင် က စား သူ နည်း နေ ပြီ လား ?
သင့် ရဲ့ ဂိမ်း ဆိုင် က စား သူ နည်း နေ ပြီ လား ? ဂိမ်း ဆိုင် ဖွင့် လှစ် …
သနားအောင် ဟန်ဆောင်ငိုပြပြီး၊ ပိုက်ဆံလိမ်တောင်းနေတဲ့ သူတောင်းစား
သနားအောင် ဟန်ဆောင်ငိုပြပြီး၊ ပိုက်ဆံလိမ်တောင်းနေတဲ့ သူတောင်းစား ငွေရဖို့ဆို လူတော်တော်များများက ထောင်မကြောက် ဘာမကြောက်နဲ့ ရသမျှနည်းကိုသုံးပြီး လိမ်လေ့ရှိတာ ထုံးစံပါပဲ။ တချို့ကလည်း တကယ်ကို လုပ်စရာအလုပ်အကိုင် မရှိလို့၊ တချို့ကတော့ …